अंग्रेजी व्याकरण अनलाइन od होज विश्वविद्यालय - प्रवेश
विभाग: अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी भाषा, होज जडान, अनलाइन गाईड, व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण
होज जडानबाट अनलाइन अंग्रेजी व्याकरण पाठ्यक्रमको साथ फ्रिफ्राइड!
होज्स विश्वविद्यालयको अनलाइन अंग्रेजी व्याकरण कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ, अंग्रेजीदेखि व्याकरण ढाँचालाई आधारभूतदेखि उन्नत कौशल स्तरहरू बुझ्ने क्रमबद्ध प्रणाली। हाम्रो आत्म-अनलाइन प्रोग्राम विशेष गरी वयस्क गैर-अ speakers्ग्रेजी स्पिकरहरू व्याकरण बुझ्न र अंग्रेजीमा आत्मविश्वास बोल्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। संज्ञा, क्रिया, धारा र adverbial मा तपाईंलाई आवश्यक सीपहरू प्राप्त गर्नुहोस्। यी सीपहरूले तपाईंलाई अ English्ग्रेजी प्रभावकारी र जानबूझकर प्रयोग गर्ने क्षमता विस्तार गर्न र / वा आय कमाउने अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्न सक्छन्!
यो कोर्स ती व्यक्तिहरूका लागि हो जुन अनलाइन सिक्न लचिलोपन चाहिन्छ, स्मार्टफोन वा मोबाइल उपकरणमा पहुँच गर्न सक्छ, कक्षाकोठा वा पारस्परिक वातावरणमा कुराकानी गर्न लजालु वा अप्ठ्यारो मान्न सक्छ, र / वा एक अंग्रेजी कोर्समा गुणस्तरीय अनलाइन अंग्रेजी पाठहरू प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको चाहान्छ। एक किफायती मूल्य। आज अनलाइन अंग्रेजी व्याकरण कोर्स शुरू गर्नुहोस्!
यो एक गैर-डिग्री खोजी पाठ्यक्रम को भागको रूपमा प्रस्ताव गरीएको छ Hodges सम्पर्क व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण कार्यक्रम, जहाँ हामी तपाईंलाई रोजगारदातासँग सम्पर्कमा राख्छौं तपाईंले सफलताको लागि आवश्यक हुन चाहिने सीपहरू।
सबै अंग्रेजी व्याकरण पाठ्यक्रमहरू खोज्नुहोस्
होजज कनेक्ट कार्यक्रमहरू खोज्नुहोस्
अनलाइन अंग्रेजी व्याकरण कोर्स जानकारी
सुरूवात गर्नुहोस्: अंग्रेजी व्याकरण अनलाइन कोर्स १, २, र।
संज्ञा, सर्वनाम, लेख, विशेषण, सम्पत्ति, दुबै वर्तमान काल र बी को कालको बीनलाई कसरी पहिचान गर्ने र प्रयोग गर्ने बुझ्नुहोस्। कसरी पूँजीकरण गर्ने, प्रश्नहरू गर्ने, र समझदारी र स्पोकन प्रवाह बढाउनको लागि अनुबंध कसरी गर्ने सिक्नुहोस्।
सुरू: $ २ 299
अंग्रेजी व्याकरण .1.०
अंग्रेजी व्याकरण .2.०
अंग्रेजी व्याकरण .3.०
शुरुवात गर्ने अंग्रेजीका लागि दर्ता गर्नुहोस्
मध्यवर्ती स्तरको साथ जारी राख्नुहोस्: अंग्रेजी व्याकरण अनलाइन कोर्स 4,,, र।
बुझ्नुहोस् कि कसरी वर्तमान र विगतको र भविष्यमा समय र सरल र प्रगतिशील कालहरू पहिचान र प्रयोग गर्ने, तुलना र अनुरोधहरू गर्ने, र खोजी र सल्लाह र अनुमति दिन। जान्नुहोस् कसरी वाक्यहरू संयोजन गर्ने र फ्रास्सल क्रियापदहरू र लि linked्क गरिएको फारमहरू बुझ्ने र बोल्ने प्रवाह बढाउनको लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
मध्यवर्ती: $ २ 299
अंग्रेजी व्याकरण .4.०
अंग्रेजी व्याकरण .5.०
अंग्रेजी व्याकरण .6.०
मध्यवर्ती अंग्रेजी को लागी दर्ता गर्नुहोस्
उन्नत स्तरको साथ समाप्त: अंग्रेजी व्याकरण अनलाइन कोर्स 7,,, र।
सबै सरल, उत्तम, र प्रगतिशील काल, विशेषण र संज्ञा खंडहरू, सक्रिय र निष्क्रिय आवाज, र काल्पनिक अवस्थाहरू कसरी पहिचान गर्ने र प्रयोग गर्ने बुझ्नुहोस्। जान्नुहोस् कसरी आवश्यकता, संभावना, सम्भाव्यता, र आशा र चाहनाहरू सबै अवधिहरूमा र विभिन्न परिदृश्यहरूमा व्यक्त गर्न। थप रूपमा, बुझाइ र स्पोकन प्रवाह बढाउन अंग्रेजी बोलीको ताल र ईन्टेनेसनको बारेमा सिक्नुहोस्।
उन्नत: $ २ 299
अंग्रेजी व्याकरण .7.०
अंग्रेजी व्याकरण .8.०
अंग्रेजी व्याकरण .9.०
उन्नत अंग्रेजीको लागि दर्ता गर्नुहोस्
एक अनलाइन कोर्स लिनुहोस् जुन तपाईंलाई अँग्रेजी इन-रियल-लाइफ प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउँछ।
कुनै पनि मोबाइल उपकरण प्रयोग गरेर सबै courses कोर्सहरू पहुँच गर्नुहोस्।
प्रत्येक कोर्स को लागी अन्तर्क्रियात्मक अध्ययन, परीक्षण, उच्चारण अभ्यास, र उपयोग रणनीतिहरू.
असीमित परीक्षण पुनः लिन्छ.
ईएसएलका निर्देशक डा। लेइशा काली द्वारा सिकाईएको पाठ्यक्रम, अ 28्ग्रेजी भाषा सिकाउने २ XNUMX वर्ष भन्दा बढीको अनुभवको साथ।
खरिद सबै English Gram9for को लागि अंग्रेजी व्याकरण स्तर वा खरीद सुरू, मध्यवर्ती, र / वा प्रत्येक $ २ 299 for को लागि उन्नत.
प्रतीक्षा नगर्नुहोस्, आज सुरू गर्नुहोस्!
अंग्रेजी व्याकरण को सबै स्तरहरु को लागी साइन अप गर्नुहोस्!
डा। लीशा कालीको बारेमा अधिक, ESL र होज अनलाइन कार्यक्रमका निर्देशक
डा। लीशा काली, ईएसएलका निर्देशक, २००od देखि होज्स युनिभर्सिटीसँग रहेकी छिन्। उनीसँग २ 2004 बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ र विगत १ 28 बर्षमा विद्यार्थीलाई अंग्रेजी दोस्रो भाषाको रूपमा सिकाउन विकसित गरिएको अनुसन्धान र व्यावहारिक अनुभवसमको संयोजन गरी भाषा सिक्ने रणनीतिहरू प्रदान गर्दछ। त्यो काम।
उनीले अनलाइन अंग्रेजी व्याकरण पाठ्यक्रम विशेष रूपमा विकसित गरेका छन् जो व्यक्ति क्याम्पसमा भित्र जान नसक्दछन्।
यहाँ के तपाइँ आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वयं paced कुनै पनि मोबाइल उपकरण प्रयोग गरेर क्यान्भास मार्फत वैकल्पिक कार्यक्रमहरू पहुँचयोग्य छन्।
व्याकरण पाठ्यक्रमहरू तपाईंलाई मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको बोलिएको र लेखिएको शब्द पछाडिको अर्थ बुझ्नुहोस्.
तपाईंलाई मद्दत गर्दछ तपाईको सीपलाई अस्तित्वबाट बाहिर अंग्रेजीमा, जसले व्यक्तिगत र सामाजिक अन्तरक्रियामा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ, साथ साथै वित्तीय अवसरहरूलाई।
टेस्टहरू बहु विकल्पबाट भर्नमा भरिन्छ र विद्यार्थीले मनपराएको जति पटक लिन सकिन्छ।
सिक्न उच्च आवृत्ति शब्दावली बरु व्यापक शब्दावली भन्दा, तपाईंलाई अधिक प्रभावकारी संवादको लागि।
प्रत्येक पाठमा व्यावहारिक अनुप्रयोग भिडियोहरूमा शब्दावली विकास गर्ने र निर्माण गर्ने तरिकाहरू सिक्नुहोस्।
एक्सेन्ट, तनाव, ताल, र धुनमा पाठ्यक्रमका साथ आफ्नो पैसाको लागि थप पाउनुहोस् - क्षेत्रहरू प्रायः परम्परागत र अनलाइन कार्यक्रमहरूमा उपेक्षित.
संक्षेप मा, होज विश्वविद्यालयको अंग्रेजी व्याकरण अनलाइन कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ ताकि तपाईले व्याकरणले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्न र आत्मविश्वासका साथ बोल्ने तरिका सिक्न सक्नुहुन्छ।
माजानी लुलिन, उपाध्यक्ष एन्कोरेज प्रोडक्शन्स मिडिया
“कार्यक्रमले मलाई आत्मविश्वास र आरामसँग अ -्ग्रेजी बोल्ने संसारमा संक्रमण गर्न मद्दत गर्‍यो। यो बिना, म यस देश मा आफ्नो शिक्षा पूरा गर्न सक्दिन। ”